Sheekh Fu’aad Maxamed Qalaf oo beeniyay inuu ku dhintay dagaallo ka dhacay Gobolka Gedo | raascasayrmedia.com
← Gurmed ciidan oo ka kala socda DKMG iyo Shabaab oo gaaraya Gedo
Barcelona oo finalka U soo baxday →
Sheekh Fu’aad Maxamed Qalaf oo beeniyay inuu ku dhintay dagaallo ka dhacay Gobolka Gedo
Sheekh Fu’aad Maxamed Qalaf oo ka mid ah saraakiisha Xarrakada Mujaahidiinta Shabaabul Mujaahidiin oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inaan lagu dilin dagaalladii ka dhacay degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo Isniintii lasoo dhaafay.
Shirka jara’aid ee Sheekh Fu’aad Qalaf ayaa imaanaya xilli xubno uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Gedo ee dowladda KMG ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Kaliil ay sheegeen in Sheekh Fu’aad iyo saraakiil kale lagu dilay dagaallo culus oo maalin ka hor ka dhacay degmada Garbahaarey kaasoo u dhexeeyay ciidamada DKMG ah oo garabsanaya xoogagga Ahlusunna iyo dagaalyahannada Xarrakatul Shabaab.
“Waxaa la faafiyay in Sheekh Fu’aad uu dhintay. Ilaahay baan i nooleeyay markii uu qaddaro ayaana dhimanayaa. Adduunka ayaana weli wax ku leeyahay,” ayuu yiri Sheekh Fu’aad Qalaf oo sidoo kale sheegay in warka la faafiyay ay ka mid ahaayeen in maydkiisa la hayo taasoo uu ku sheegay been weyn oo la faafiyay.
Dagaalkii ka dhacay degmada Garbahaarey ee xarunta goboolka Gedo Isniintii lasoo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay dad u badan dhinacyadii dagaalamay, kuwaasoo la sheegay inay ku jireen saraakiishii hoggaaminayay labada ciidan.
“Waxaan u bishaareynayaa muslimiinta, waxaana ka nixinayaa saacaddan cadowga Islaamka oo Mareykanku u horreeyo iyo kuwa kale, waxaana leeyahay inta aan noolahay waan idinla dagaalamayaa,” ayuu yiri Sheekh Fu’aad Qalaf.
Saraakiisha dowladda KMG ah ah ee sheegay inay dileen Sheekh Fu’aad ayaa sidoo kale sheegay inay dileen sarkaal kale oo magaciisa ay ku sheegeen Shukri Xaaji Aadan, inkastoo uusan sarkaalkan weli la hadlin saxaafadda.
Dowladda Soomaaliya ayaa horay u sheegay inay dileen Cumar Xamaami oo looga yaqaan Soomaaliya Sheekh Abuu-Mansuur Al-Amriiki, balse hadal uu bar Internet ah dhigay ayuu ku sheegay inuu weli nool yahay oo aanu dhiman.